Taliyaha Ciidamada Difaaca Uganda oo lagu wada in Tuulada Golweyn oo lagu dilay 12 askarI oo lagu wado in uu booqdo – Shacabka News
Taliyaha Ciidamada Difaaca Uganda oo lagu wada in Tuulada Golweyn oo lagu dilay 12 askarI oo lagu wado in uu booqdo
(Arbaco, Augusto, 16, 2017 (SH-NEWS)-General David MuhooziTaliyaha Ciidamada Difaaca dalka Uganda (UPDF) .ayaa Talaadadii shalay booqasho rasmi ah ku yimid Magaalladda Ujeedka booqashadiisa ayaa ah qiimeynta howlgalka ka socda dalka Soomaaliya. iyadoona booqashadiisa ay tahay tii ugu horreysay uu kuyimid soomaliya tan iyo markii loo magacaabay xilkaas.
Inta uu ku suganyahay dalka Soomaaliya, waxaa uu kulamo la qaadan doonaa saraakiisha, waxaana sidoo kale uu kormeer ku sameyn doonaa saldhigyada ciidamada.Ergeyga Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna Madaxa AMISOM, Amb. Francisco Madeira, ayaa dowladda iyo shacabka dalka Uganda, uga mahadceliyay taageerida ay muujiyeen.
Gen. Muhoozi, ayaa shalay waxaa uu la kulmay taliyaha howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Gen. Osman Noor Subagle iyo Ambassador Madeira.Ambassador Francisco Madeira ayaa xaqiijiyay in 12 askari ciidamada AMISOM looga dilay weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose bishii lasoo dhaafay.
Warsaxaafadeed uu soosaaray xafiiska Madaxa AMISOM ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in ay ciidamada wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayey amniga dariiqa u dhaxeeyo Muqdisho iyo Baraawe.
“Ujeedada booqashada ayaa ah hubinta howlgalka ciidamada, sidoo kale waxaa uu booqan doona tuulada Golweyn oo ah halkii dhawaan Al Shabaab ay ku dileen askar badan oo ka tirsan kuwa dowladda Uganda”, ayaa lagu yiri war kasoo baxay AMISOM.
sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa lagu xaqiijiyay weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose bishii lasoo dhaafay.in 12 askari ciidamada AMISOM looga dilay , 7 kalena looga dhaawacay, kuwaas oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo.
Previous Previous post: Wasiirkii hore ee arimaha dibada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo ku geeryooday Maraykanka.
Next Next post: Mareykanka “waxaan ku ammaaneynaa Dowladda Soomaaliya fududeynta a iyo isa-soo dhiibidda Abu Mansoor”